करोड क्लबमा ‘फाटेको जुत्ता. - KlipMandu
Business Entertainment General Latest
करोड क्लबमा ‘फाटेको जुत्ता.
November 5, 2017 klipmandu0Comments
सौगात मल्ल र प्रियंका कार्की स्टारर फिल्म ‘फाटेको जुत्ता’ ले दुई दिनमा एक करोड माथिको व्यापार गर्न सफल भएको छ । शुक्रबार र शनिबार गरी आफ्नो फिल्मले एक करोड माथिको व्यापार गरेको निर्माता अर्जुन कुमारले जानकारी दिए । ‘शनिबार जताततै हाउसफूल छ’, निर्माता कुमारले भने ।
दर्शकमाझ सौगात, निर्माता र निर्देशक
एक सय बढी पर्दाबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘फाटेको जुत्ता’ को शनिबार एकल र मल्टिप्लेक्स हलमा दर्शकको खचाखच भिड लाग्यो । अभिनेता सौगात मल्ल, निर्माता कुमार र निर्देशक निकेश खड्का सहितको टिम शनिबार राजधानीका हलहल गएका थिए । दुई दिनमा एक करोड नाघेपनि फिल्मले गरेको खास व्यापारिक हिसाब भने आउँन बाँकी रहेको निर्माता अर्जुन कुमारको भनाई छ । कमेडी फिल्ममा सौगात र प्रियंका सहित कामेश्वर चौरसिया, रविन्द्र झा लगायतको अभिनय छ ।
← A courageous 8 gunshot survivor
बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् →
रोबोट सोफियालाई नागरिकता ! मान्छेले जस्तो अन्तरबार्ता दिएर अचम्मित परिन सोफियाले । भिडियो हेर्नुहोस
प्रधानमन्त्रीले हप्काएका राउटेहरुलाई उपराष्ट्रपति पुत्रले गरे सहयोग, हौसिदैं भने पुनको जय होस्